Published Mon May 06 2019 12:21:39 GMT+0000 (UTC)
Leader of the Economic Freedom Fighters (EFF) party, Julius Malema, shares a light moment with party member during his election rally at Orlando Stadium in Soweto, South Africa, Sunday, May 5, 2019. Campaign rallies for South Africa’s upcoming election have reached a climax Sunday with mass rallies by the ruling party and one of its most potent challengers. (AP Photo/Themba Hadebe)
Leader of the Economic Freedom Fighters (EFF) party, Julius Malema, greets supporters as he arrives at the Orlando Stadium in Soweto, South Africa, Sunday, May 5, 2019. Campaigning for South Africa’s upcoming election have reached a climax Sunday with mass rallies by the ruling party and one of its most potent challengers. (AP Photo/Themba Hadebe)
Supporters of the Economic Freedom Fighters (EFF) party, attend their election rally at Orlando Stadium in Soweto, South Africa, Sunday, May 5, 2019. Campaign rallies for South Africa’s upcoming election have reached a climax Sunday with mass rallies by the ruling party and one of its most potent challengers. (AP Photo/Themba Hadebe)
Leader of the Economic Freedom Fighters (EFF) party, Julius Malema, greets supporters as he arrives at Orlando Stadium in Soweto, South Africa, Sunday, May 5, 2019. Campaign rallies for South Africa’s upcoming election have reached a climax Sunday with mass rallies by the ruling party and one of its most potent challengers. (AP Photo/Themba Hadebe)
A helicopter pulls an Economic Freedom Fighters (EFF) party's banner, over Orlando Stadium in Soweto, South Africa, Sunday, May 5, 2019. Campaign rallies for South Africa’s upcoming election have reached a climax Sunday with mass rallies by the ruling party and one of its most potent challengers. (AP Photo/Themba Hadebe)
Leader of the Economic Freedom Fighters (EFF) party, Julius Malema, addresses supporters at Orlando Stadium in Soweto, South Africa, Sunday, May 5, 2019. Campaigning for South Africa’s upcoming election have reached a climax Sunday with mass rallies by the ruling party and one of its most potent challengers. (AP Photo/Themba Hadebe)
Supporters of Economic Freedom Fighters (EFF) party, attend an election rally at Orlando Stadium in Soweto, South Africa, Sunday, May 5, 2019. Campaign rallies for South Africa’s upcoming election have reached a climax Sunday with mass rallies by the ruling party and one of its most potent challengers. (AP Photo/Themba Hadebe)
A supporter of the Economic Freedom Fighters (EFF) party, attends an election rally at Orlando Stadium in Soweto, South Africa, Sunday, May 5, 2019. Campaign rallies for South Africa’s upcoming election have reached a climax Sunday with mass rallies by the ruling party and one of its most potent challengers. (AP Photo/Themba Hadebe)
Leader of the Economic Freedom Fighters (EFF) party, Julius Malema, centre, with party members sing and dance after addressing supporters during an election rally at Orlando Stadium in Soweto, South Africa, Sunday, May 5, 2019. Campaign rallies for South Africa’s upcoming election have reached a climax Sunday with mass rallies by the ruling party and one of its most potent challengers. (AP Photo/Themba Hadebe)
Supporters of Economic Freedom Fighters (EFF) party, dances as he holds a party flag during an election rally at Orlando Stadium in Soweto, South Africa, Sunday, May 5, 2019. Campaign rallies for South Africa’s upcoming election have reached a climax Sunday with mass rallies by the ruling party and one of its most potent challengers. (AP Photo/Themba Hadebe)